सामाजिक सञ्जालमा वाहियात कुरा गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
असार २८, २०७५| प्रकाशित १४:०३
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का सांसद महेश बस्नेतले बाढी पिडितको संवेदनालाई ख्याल नगरी सामाजिक सञ्जालमा पानीजहाजको कुरा गर्नेहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। अविरल वर्षा र बाढीका कारण पानी जमिरहेको क्षेत्रको फोटो राख्दै पानीजहाजको कुरा गर्नेलाई 'वाहियात' भन्दै उनले कारबाहीको माग पनि गरेका छन्।
संसदमा बिहीबार बस्नेतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
बस्नेतले अमृता लम्सालको फेसबुक पोस्टलाई जोड्दै 'भक्तपुरका जनता बाढीले पीडित भइरहेका बेला कतिपयले भने सामाजिक सञ्जालमा पानी आएछ अब जहाज कहिले आउँछ' भनेर उडाइरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
'सक्नुहुन्छ भने बाढीपीडित भक्तपुर र देशभरका जनतालाई सहयोग गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने यो संवेदनामा खेलेर पानी जहाजको कुरा नगर्नुस्', बस्नेतले थपे, 'सामाजिक सञ्जालमा यो वाहियात कुरा गर्ने मान्छेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ। साइबर क्राइमलाई कडा ढंगले लागू गर्नुपर्छ। म सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।'
तपाईं का कुरा ठिक छन माननिय महेश ज्यू । वाईहात कुरा हो भनेर निर्णय कस्ले गर्ने ? गणतान्त्रिक पध्दति स्वीकार गरेर राजनीतिमा लागेर सासंद भएपछि आम जनता के भन्छन सुन्ने हिम्मत हुनु पर्यो नी । वरू तपाईं को अध्यक्ष लाई पानी जाहाज को कुरा हरेक भाषणमा गर्न रोक्नु होस न, अपि जनताले पनि केही भन्दैनन । आखिर पानि जहाजको कुरा त हामीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले नै सिकादिनु भएको होइन र ? नत्र हामी भुपरिवेष्ठित देशमा वस्ने निमसरा लाइ त्यती ठूला कुरा के थाहा र......
नगरकोटमा दोहोरो पर्यटन शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन